အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ကန်ထုတ်ပစ်ချင်တဲ့ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ
Posted by တီချမ်း at 4:19 AM
AMK September 2, 2010 at 5:08 AM
လက်လန် တယ်ဗျာ အမှန်တွေကြီးပဲ
အန်တီချမ်း September 2, 2010 at 6:20 AM
အေအမ်ကေ ဆိုလို့အေးမြတ်ကို လားလို့
Leo September 2, 2010 at 7:53 AM
မှန်လိုက်တာဗျာ။ အနော်ကတော့ အနော်မကြိုက်ဘဲ လာအီတဲ့သူဆိုရင် အိုင်ဖုန်းတွေ၊ အိုင်ပတ်တွေ ပူဆာလိုက်တာပဲ။ ပြန်ပြေးရော ဟားဟား။
အဲသည့်နည်းလဲကောင်းတယ်။ ချူစားတဲ့သူလို့ထင်တော့ လစ်တာပဲ။ :D
Rita September 2, 2010 at 8:23 AM
Rita September 2, 2010 at 8:24 AM
Maugham လောက် မတော်သေးပါဘူး။
သူ မယူချင်တဲ့ မိန်းမကို ဘာစကားတခွန်းမှ မပြောဘဲ ပြေပြေလည်လည် ခါချလိုက်တဲ့အကြောင်း ဝတ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ရေးထားတာ ရှိတယ်။ တဘက်က သူ့ခါချလို့ခါချမှန်းတောင် မသိဘူး။ သူ့ဘာသာ စိတ်ကုန်ပြီး ထွက်သွားတာ။ သိပ်မိုက်တာပဲ။
တေဇာ (လရောင်လမ်း) September 2, 2010 at 3:01 PM
Crystal September 2, 2010 at 4:44 PM
ကန်မယ့် ခြေထောက်လေး နာသွားမှာပေါ့ :P
အန်တီချမ်း September 3, 2010 at 5:54 AM
ဒေါ်ရီတာ ဖျက်လိုက်တဲ့ ကွန်မန့်လေးက အပေါ်က ကွန်မန့်တာ ကိုပြော တားဆိုရင် အမြင်လေးကို သိချင်မိတယ်
Rita September 3, 2010 at 8:03 AM
ဖျက်လိုက်တာနဲ့ ရေးထားတာနဲ့က ဘာမှ သိပ်မကွာဘူး။ စကားလုံးနည်းနည်း လိုနေလို့ ထပ်ဖြည့်လိုက်တာပဲ ရှိတယ်။ email ထဲကို မရောက်ဘူးလား။
Bino September 4, 2010 at 6:14 AM
I cannot blow without emotion.
I love my wife day after day.
But I can't promise how long will be.....
အန်တီချမ်း September 4, 2010 at 11:26 PM
အီးမေးလ် ထဲကိုရောက်လာအောင်မ လုပ်ထားဘူး